Busy Shapes, no fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Busy Shapes, no fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Indraindray dia antenainay ny fanambaràn'i Apple, izay itaterany ny fampiharana na ny lalao voafantina ho App of the Week, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nisy izany. Ny tovolahy avy any Cupertino dia nisafidy ny lalao Busy Shapes, hanolotra azy maimaim-poana mandritra ny herinandro iray manontolo, hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Busy Shapes dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro. Ity fampiharana ity dia natao ho an'ny mpikambana tanora indrindra ao an-trano, eo anelanelan'ny 2 sy 5 taona, satria manampy azy ireo hampivelatra ny faharanitan-dry zareo ao anaty tontolo nomerika mavitrika ankoatry ny fampivoarana ny fahaizan'izy ireo misaina.
Miaraka amin'ny Busy Shapes, ny kely dia hanatsara ny fahaizany mitantana zavatra tsotra amin'ny alàlan'ny fampihetseham-batana maromaro, izay tsy maintsy fandokoanao ireo endrika amin'ny toerana mety. Raha manana fanontaniana ny ankizy kely, ny fampiharana fotsiny, dia hitarika azy ireo mba tsy hahavery ny antony manosika azy ireo amin'ny lalao. Ny zavatra ary koa ny écran dia miova tsindraindray ka tsy mankaleo zaza tsy miandany ny fahasosorana ary leo ny fampiharana izy ireo.
Ny fiasan'ny Busy Shapes dia natao ho an'ny ankizy kely, hany ka amin'ny alàlan'ny fanolorana ny rantsan-tànanao eo amin'ny efijenon'ny fitaovantsika fotsiny, afaka mifandray amin'ny zavatra haingana sy haingana. Rehefa mandroso ny kely amin'ny famahana ny dingana samihafa ny ankizy kely dia mitombo tsikelikely ny fahasarotana, noho ny Artimental Intelligence tafiditra ao anaty fampiharana.
Ny Busy Shapes dia misy amin'ny fiteny maro izay ahafahana mahasoa koa ny zanatsika manomboka manomboka amin'ny fiteny hafa mba hahafahany manitatra tsikelikely ny voambolany. Ity lalao ity dia mitaky farafaharatsiny iOS 7 na taty aoriana, mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod Touch ary mitaky latsaky ny 40 MB amin'ny fitaovantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Busy Shapes, no fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Roma: Ady tanteraka - Fanafihana baribariana Ho tonga amin'ny iPad amin'ny volana martsa
Ny faran'ny Apple? Efa hitako ity sarimihetsika ity